BABITY LAURENT : Homarihina ao Fenoarivo-Atsinanana ny momba azy
Tanterahina ao Fenoarivo-Atsinanana renivohitry ny Faritra Analanjirofo ny hetsika manokana ho fahatsiarovana an’i Babity Laurent mpampianatra sady mpanoratra nitondra avo ny kolontsaina Betsimisaraka. 17 septembre 2019
Ny zoma 27 septambra no hanatanterahina izany ao amin’ny efitrano malalaky ny lapan’ny Faritra Analanjirofo. Hisy ny fijoroana vavolombelona hataon’n zanany. Misy ihany koa ny antsan-tononkalo. Ny Havatsa Upem sampana Fenoarivo-Atsinanana sy ny tranoben’ny kolontsaina ary ny minisiteran’ny serasera sy ny kolontsaina amin’ny alalan’ny fitaleavam-paritra Analanjirofo no tompo-marika amin’izao hetsika nampitondraina ny anarana « Andron’i Babity Laurent » izao.
Manana anjara toerana lehibe eo anivon’ny haisoratra malagasy i Babity Laurent. Izy no filoha voalohan’ny Havatsa Upem sampana Toamasina. Tamin’ny fiteny Betsimisaraka no nanoratany : angano, tononkalo, kabary. Maro ireo boky efa nosoratany : Ravin-dingosa, ohabolana Betsimisaraka, fangalam-biavy Betsimisaraka. Rariny sy hitsiny raha hotsarovana manokana. Babity Laurent teraka ny taona 1943 ary nodimandry ny taona 2011.